Push Azụ ahịa na Passbook | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 27, 2012 Na Mọnde, Nọmba 27, 2012 Douglas Karr
M dị nnọọ nso nso a malitere iji Akwụkwọ edemede na iPhone m mgbe ị na-eleta Starbucks. Agbanyeghi na m ji m anya isi Starbucks Kaadị Gold, Obi dị m ezigbo ụtọ iji belata ọkpụrụkpụ obere akpa m site na otu kaadị. Naanị m na-enyefe barista ekwentị m na ha nwere ike i cardomi kaadị ụgwọ ọrụ m ozugbo! Iji ngwa Starbuck ahụ, enwere m ike ibugharị kaadị m site na ekwentị m.
The Web na nso nso a mere a biputere ihe nile banyere Passbook na otu azụmaahịa ga-esi wụba n'ụgbọ, mana ikwu okwu na post n'ezie masịrị m. N'ihi Apple jikọtara Passbook yana ọrụ ngosi ya, gafere ka ọ bụrụ ohere dị elu maka azụmaahịa iji kwalite mmelite dị mfe nye ndị ọrụ ya.
Nke a bụ nkọwa si Jim Passell na edemede ahụ, na-akọwa na ọ bụ nnukwu nloghachi na itinye ego:
Onye ọ bụla n’ime ndị ahịa m nwetara otu n’ime njem m, na-enweta mmelite kwa izu nke onyinye ọhụrụ. Passgafe ha mere ka ha nwee ume ma ọ bụ mee ka ha mata. Ma ọ bụ m na-ezigara ha ọkwa banyere ahịa na-abịa, ma ọ bụ ihe ndekọ nke onwe site na njikwa ụlọ ahịa, ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ya mere, paspọtụ m na-anọdụ n'elu obere akpa ha wee bụrụ ọwa m iji soro ha kwurịta okwu. Ha na-abụ onye ahịa na-adịgide adịgide, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịmalite naanị coupon-clipper.
Ka anyị chee ya ihu. Igbe mbata ahụ jupụtara na nsogbu nzacha spam na ndị na-azụ ahịa enweela mmetụta na ịre ahịa email. Ọ bụ ezie na a ka nwere nlọghachi na-enweghị atụ na ntinye ego n'ihi ọnụ ala email, ị emaila ntị bụ nsogbu na-eto eto. Izi ozi ederede bụ teknụzụ nrụgide ọzọ dị oke egwu, mana ndị na-azụ ahịa na-ala azụ mgbe ọ bụla n'ịdenye aha na ịhapụ nọmba ekwentị ha maka ịnweta. Ntughari ngosi site na ngwa mkpanaka na ngwa dika Passbook nwere ike bụrụ ihe kacha mma push ahịa ohere.
Anyị atụlewokwa Geofencing, usoro ihe eji eme ahia di nso nke na-etinye SMS (ozi ederede) ma obu ahia Bluetooth. Ozugbo ekwentị mkpanaka gị na-agafe, ịnwere ike ịkwanye ọkwa. Passbook na-enye geolocation dị ka usoro. Nwere ike ịkwanye mmelite gafere mgbe mmadụ na-abanye nso na mpaghara. Nke kachasị mma, ịchọghị teknụzụ ọ bụla ọzọ iji kwado ya ebe ọ bụ na arụchara ya ozugbo maka ọrụ ọrụ geolocation ekwentị.
Ebe ọ bụ na Akwụkwọ ọgụgụ abanyelarịrị ndebanye tiketi, akwụkwọ ikike ịbanye, coupon ma ọ bụ usoro iguzosi ike n'ihe, ndị a bụkwa ndị ọrụ gị kachasị arụ ọrụ. Ha esorola ụlọ ọrụ gị nwee mmekọrịta. Na nkwado agbasaghị na ngwaọrụ iOS, Attido Mobile amalitela PassWallet, ngwa gam akporo na-ejekwa ozi maka ọkọlọtọ ngafe.
Nwere ike ịzụlite nke gị Pass n'akụkụ ngwa iOS gị site na iji ọbá akwụkwọ amaala, ma ọ bụ ịnwere ike iji SDK dị ka Passslot. Ulo oru nke ato na ulo oru nlekota gunyere Obere akpa, Ogwe osisi, Paswọọdụ, Akụkụ, PassRocket na PassKit.
Tags: geolocationteknụzụ ekwentịruepassbook apụl passbookpaspọtụpasskitụzọogbepassslotobere akpapush ahịateepu teknụzụobere akpa
Nov 27, 2012 na 5:43 PM
Abụ m onye nchoputa / CEO nke PassTools, na anyị bụ otu n'ime ndị isi nke abụrụ na-ewu ụlọ ohere. Ọ ga-amasị gị itinye anyị na ndepụta gị.
Nov 27, 2012 na 10:56 PM
Emela! Daalụ Joe!
Nov 28, 2012 na 12:12 PM
Ọfọn e dere ibe Douglas!
Ana m eduga ndị otu ngwaahịa na Vibes (http://www.vibes.com), ụlọ ọrụ teknụzụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ụdị na ndị na-ere ahịa ka ha na ndị ahịa ha nwee mmekọrịta na-adịte aka. Anyị na-eme ntakịrị nzọ na Passbook, nweela ike itinye ikike ndụ njikwa ike (mepụta - nyefee - jikwaa - nyochaa - re-lekwasịrị anya) n'ime ikpo okwu anyị. Anyị amalitela Mmemme Passeta Beta ma nwee ọtụtụ nnukwu, ụdị mba dị iche iche na-achọ iwepụta ikike Passbook dịka akụkụ nke usoro atụmatụ ịzụ ahịa ekwentị ha.
Achọrọ m ikwughachi obi uto gị banyere Passbook. Ekwenyere m na ọ ga-agbanwe ụzọ ụdị ndị ahịa si eso ndị ahịa ha na-eguzosi ike n'ihe na mgbe ụfọdụ. O meela Google ka ọ chegharịa usoro Google Wallet ha.
Nov 28, 2012 na 4:51 PM
Ezigbo ederede, na ekele maka ịkekọrịta na nhọrọ mmepe. N'ịtụle uru ndị ahịa na ndị ahịa bara, ọ bụ ihe ijuanya na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ amabeghị n'ụgbọ ma tinye onwe ha na Passbook. Ikwuru, ọ dị oke mma maka ndị na-azụ ahịa (ejirila m Starbucks ngwa ahụ kemgbe m zụtara iPhone5), ọ dịkwa ka ụzọ dị mma iji zụọ ahịa taa ndị ike gwụrụ. Na-atụ anya ịhụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-esonyere Passbook, na iwepụ plastik na obere akpa m.
Jan 17, 2013 na 6: 14 AM
Akwa isiokwu Douglas na ekele maka ịkpọtụrụ.
Ike ikike nwere ike ịbụ njirimara kachasị akpọrọ nke Passbook. Ndị ahịa anyị na ndị mmekọ anyị na-enwe obi ụtọ mgbe niile mgbe mbụ ha nwetara ozi mkpọchi mkpọchi na 'ngagharị gburugburu'. Ọ na - enyere ha aka ịnyefe Passbook Passes n’ime azụmaahịa ha, ma soro ndị ahịa ha soro. ntụgharị ha adịghị nnọọ nanị mejuputa a digital nnọchi nke a static dere ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe kaadị.
Onye ọ bụla nwere ike ịnwe 'mmelite a' maka onwe ya ugbu a. Naanị budata 'AbraKebabra' site na peeji nke ụlọ anyị ma tụgharịa Pass gafee iji jikọọ URL Mmelite URL. Vidiyo a ngwa ngwa na-egosi otu esi eme ya: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
Ọ bụrụ n’ị nwetụbeghị Passbook Push, ọ ga-abara ya uru ịhapụ ya; na mgbe AbraKebabra sample Pass gosipụtara nguzozi nhazi, ohere ọ nwere enweghị njedebe (dịka mpaghara ọ bụla nwere ike imelite yana 'agbanye')